बाबुरामलाई नेकपाले भन्यो : बुढीगण्डकी आयोजनाबारे बोलेको कुराको प्रमाण देऊ
काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना कमिशनका कारण अलपत्र पारेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमेतको संलग्नता रहेको भन्ने प्रमाण पेश गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बाबुरामलाई ओली र प्रचण्डले घुस लिएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका हुन् ।
केही दिनअघि गृहजिल्ला गोरखामा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताएका थिए ।
यस्तै उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा घुस लिएको भनी डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप आधारहीन र झुटो भएको बताएका छन् ।
उनले त्यससम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती पनि दिएका छन् ।
बाबुरामको उक्त भनाइको नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको थियो । डा भट्टराईले बूढीगण्डकीसम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणी गरेको जनाउँदै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए ।
नेकपाका सांसदले दसैंभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने
कांग्रेसको प्रश्न : महामारीमा नगर्ने भए उपचार, किन चाहियो सरकार ?
साझा पार्टीले भन्यो : ‘पैसा भए बाँच, नभए मर’ भन्नु सरकारको क्रुरता हो